सत्ताको नसामा किम्कर्तव्यविमूढ प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छाडे हुन्छ - हिमाल दैनिक
सत्ताको नसामा किम्कर्तव्यविमूढ प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छाडे हुन्छ
यसपल्ट जस्तो व्यर्थता, निरर्थकता र निराशाको अनुभूति आजजति मलाई कहिल्यै पनि भएको थिएन
४ जेष्ठ २०७७, आईतवार २०:००
http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/tag/rain/ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रखर राजनीतिक विश्लेषक प्रदिप गिरिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना कहरबाट प्रताडित देश र जनताले व्यहोरी रहेको रोग र भोकको समस्या समाधानमा किम्कर्तव्यविमूढ र संवेदनहीन भएको आरोप लगाएका छन्।
http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/tag/rain शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै नेता गिरिले सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति भयानक शब्दवाण प्रहार गरे।
Phentermine Free Overnight Fedex Delivery उनले सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीलाई लक्षित गर्दै उनले रक्सीको नसा खाएपछि, पैसाको नसा पाएपछि र सत्ताको नसा गाएपछि लागेको भन्दै उनलाई नसामा रुमलिएको आरोप लगाए।
http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/tag/hobbies द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा वेलायतका प्रधानमन्त्री नेविन च्याम्बरलिनलाई चर्चिलले समस्या समाधानमा मार्ग खुला गर्न भनेको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकास दिन सुझाव दिए।
Get Prescription Online Phentermine 37.5 प्रस्तुत छ नेता http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/tag/southeastern-collegium/ प्रदिप गिरिले व्यक्त गरेको विचारको अंशः
Phentermine Canada Buy सभामुख महोदय,
Get Prescription Online Phentermine 37.5 म यस्तै, सोह्रै आना यस्तै नभएपनि लगभग यस्तै सदनमा २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बोल्दै छु। र राष्ट्रपतिको सन्देशको नाममा औपचारिक रुपमा पेश गरिएको यस किसिमको दस्तावेजमा सधैँ बोलेको छु।
Ordering Phentermine From Canada तर, यसपल्ट जस्तो व्यर्थता, निरर्थकता र निराशाको अनुभूति आजजति मलाई कहिल्यै पनि भएको थिएन।
मलाई सम्झना छ, सभामुख महोदय, स्वयं यहाँसँग मलाई २०४२ सालमा केन्द्रिय जेलमा पहिलो पटक साक्षातकार भएको थियो। त्यो पनि आज ३५ वर्ष भइसकेछ।
र त्यो भन्दा लगभग १० वर्ष अघि वर्तमान प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीसँग भद्रगोल जेलमा देखादेख भएको थियो। उहाँलाई गोलघरमा राखिएको थियो, नजिकबाट कुरा गर्न पनि गाह्रो हुँदा देखाखेख भएको थियो।
कतिवर्ष वितिसकेछ त? अनि मलाई यो दस्तावेज पढ्दा, राष्ट्रपतिको सम्बोधन पढ्दा आफ्नै मनमा प्रश्न आएको छ कि, यत्तिका वर्ष हामी के गरेर बसेका थियौँ त? यो दस्तावेज सरकारको किम्कर्तव्यविमूढताको एउटा ठोस प्रमाण छ। किम्कर्तव्यविमूढताको।
तर, समस्या के छ भने, त्यो किम्कर्तव्यविमूढता र दिशाविहिनताले म पनि संक्रमित भएजस्तो छ। मलाई पनि के बोलुँ के बोलुँ जस्तो भएको छ। कसको विरोध गर्ने? जेलका सहकर्मीको विरोध गर्ने? देश परिवर्तंनका लागि लडेका मान्छेलाई हाँसोमा उडाउँने? अथवा कुन पक्षको समर्थन गर्ने? कि हामी सबैले विगत ३०/४० वर्षमा बनाएका सरकार लगभग उस्तै भएनन् त?
म आजको यस विकट घडीमा सर्वप्रथम सभामुख महोदयको माध्यमबाट सबै सहयोद्धालाई सम्झना गराउँन चाहन्छु, हामीले ४० वर्षदेखि लगभग अभाव गतिमा भोग्दै आएको सत्ता सानो अन्तरालपछि अथवा सानो अन्तराल बाहेकले हामीलाई सत्ताको त हस्तान्तरण गरेछ तर, सत्ताको रुपान्तरण गरेनछ। म यस कुरालाई बारम्बार दोहोर्याएर भन्न सक्छु।
फलस्वरुप आज जुन कर्तव्यविमूढताको अवस्था आएको छ। भ्रष्टाचारमा सिंगो देश आकंक्ष डुबेको छ, सुशासन भन्ने शब्द जिब्रोमा अड्किएको छ, फलगत कुशासन छ र त्यस कुशासन र भ्रष्टाचारलाई यस लकडाउनले ठोस रुपमा छाम्न र बुझ्न सकिने, तौलन सकिने रुपमा गाउँ गाउँमा प्रत्येक व्यक्तिलाई देखाइदिएको छ।
म विगत दुई महिना लगभग लगातार रुपमा आफ्नै गाउँमा थिएँ। लकडाउन घोषणा हुनु दुई दिनअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, मेरो जन्मथलो घुम्न गएको बेला त्यहिँ लकडाउनमा परेँ।
मलाई व्यक्तिगत रुपमा कसैका बारे केही भन्नु छैन। कुनै सिडिओ, गृहसचिव, डिआइजी वा कुनै आइजीकाबारेमा पनि केही भन्नु छैन। मन्त्रीको पनि नाम लिएर केही भन्न चाहन्न। चाहेमा सक्छु म, यत्रो सम्वेदन शून्यता! यत्रो अमानवीयता! प्रतिनिधि मूलकताको यत्रो अभाव! आम नागरिकको अवस्था के होला?
कसरी यो लकडाउनको कठिनाई खेपिरहेका होलान्? र कति दिन खेप्लान्? यो प्रश्नले मेरो तितो अनुभवले मैले तपाईका मन्त्रीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा (तपाई होइन, हाम्रा भन्नु पर्यो) मैले अनुभव गरेको छु।
सिडिओ हस्याङफस्याङ छन्, डिआइजी सवारी चलाउँदै फुर्सदै छैन। म यसमा विस्तारमा जान चाहन्न। किन म उनीहरुलाई दोष दिन चाहन्न, हामीले सत्ताको हस्तान्तरण त पायौँ तर, रुपान्तरण गर्न सकेनौँ।
यो तितो अनुभूति सभामुख महोदयलाई पनि होला, उहाँले आफ्ना सहकर्मी, साथीलाई पनि बताउनुहोला भनि बोल्दैछु।
र किम्कर्तव्यविमूढताको कुरा के यो नसा लागेको हो? यो दस्तावेजमा आजको मुख्य समस्या मानवजातिको इतिकासमा आज अघि कहिल्यै नपरेको समस्याकाबारेमा एउटै पनि ठोस चिन्तन छैन। सधैँ भन्दै आएको भ्रवष्टाचारको नियन्त्रण, सुशासनलाई लागू गरिने अवश्य छ।
अर्को थप कुरा के छः कसैलाई भोकै रहन दिन्नौँ, भोकै मर्न दिन्नौँ। म चेतावनी दिन चाहन्छु, भोकले नै मर्ने अवस्था आउँदैछ। विभिन्न कविहरुले भनिसके, सम्वेदनशील मानिसहरुले भनिसके, सम्वेदनशील नेताहरुले नै भनिसके, रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था नेपालमा आउँदैछ।
र यो सरकार, यो राज्यको संयन्त्र त्यसप्रति पूर्ण रुपले उदासिन छ। किन उदासिन छ? भनिन्छ, रक्सीको नसा त खाएपछि लाग्छ, पैसाको नसा पाएपछि लाग्छ तर, यो सत्ताको नसा भने गाएपछि लाग्दोरहेछ। अहो! तपाई त कति ठूलो मान्छे!, तपाई त महान, यो देश बनाउँन तपाईको जन्म भएको भनेपछि मान्छे व्यहोस हुने रहेछ।
हाम्रा नेताहरु, खासगरी सत्ताधारी पार्टीका नेताहरुलाई मुलुकको समस्याको जानकारी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मानवताको इतिहासमा, द्वितीय महायुद्धमा एटम वमले ल्याएको खतरा भन्दा बढी खतरा कोरोना। यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ। वाफरे, अब गरिने गरिनेको लिष्ट? बीस, ३० वर्षको मेरो संसदीय कार्यकालमा यत्रो ज्यादा गरिनेछ भन्ने कहीँ मैले पढेको थिइन्।
यो गरिनेछ भनि यसरी नै गरिनेछ भन्ने र गरिने हो भने यो गरिनेको ठाउँमा मरिनेछ लेख्नु पर्नेछ केही दिनपछि। जुन कुरालाई सम्बोधन गरेर त्यो मरिने खतरालाई हटाएर गरिने कुरा गर्नु पर्ने हो त्यसका बारेमा यो दस्तावेज पूर्ण रुपले मौन छ। र जिम्मेवारीबाट पन्छिनका लागि भ्रष्टाचार र सुशासन शब्दको नाम मात्रै उल्लेख छ।
मैले अघि सहानुभूतिका रुपमा भने, आफ्ना सहकर्मी, सहयोद्धालाई म आरोप लगाउन चाहन्न। तर, मुख्य ठाउँमा बसेको व्यक्ति, नेतृत्वमा बसेको व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्ने बेलामा अथवा सभामुखको आसनमा बसेको व्यक्तिले होइन, के गर्नु अवस्था यस्तै छ भन्न पाइँदैन।
कुनै घरमा तपाईले कुनै कोतवाल वा चौकीदार राखेको छ, गार्ड राखेको छ, त्यो घरमा चोरी भयो भने चोर खोजिँदैन। पहिले त्यो गार्डसँग स्पष्टिकरण मागिन्छ, त्यो चौकीदारसँग स्पष्टिकरण मागिन्छ।
त्यसैले म यो सरकारसँग पहिलो पटक स्पष्टिकरण माग्दैछु। म त्यी वक्तामध्ये होइन, म त्यस्ता सांसदमध्ये होइन, त्यस्तो प्रतिपक्षको सदस्यमध्ये होइन जसले विनाकारण अत्तो थापेर सरकारलाई जहिले विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्ने गरेको छ। यो सरकारको अकर्मण्यता, अक्षमता लगभग त्यस्तै छ, जस्तो द्वितीय महायुद्धका मुखमा वेलायतका प्रधानमन्त्री नेविल च्याम्बरलिनको थियो। च्याम्बरलिनलाई हटाउन उनकै कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्य लर्ड एमेरीले उठेर उनकै पार्टीका चर्चिलले उठेर भन्नु परेको थियो, ‘Enough is enough’। हामीमाथि दया गर, हामीमाथि दया गर, त्यो कुर्सी छोडिदेउ। म त्यो दृश्य यहाँ दोहोर्याउन चाहन्न र दोहोरियोस् भन्ने पनि चाहन्न।
मलाई प्रधानमन्त्रीको तथाकथित देशभक्तिमा कुनै शंका छैन। उहाँले दिएको बचन र उहाँको राष्ट्रवादका अनुसार, यस्तै हो भने उहाँले जनसेना बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डसँग हातमा हात मिलाएर भारत र चीनलाई सवक सिकाउन बेर छैन।
तर, समस्या छ आज, भोकमरीको। जो आगामी दिनमा आउने वाला छ। त्यसैले म के चाहन्छु भने, नेपालीहरु बलिया बाङ्गा भए भने एक दिन सिंगो विश्वमा कुनै दिन अमरसिंह थापाले खुकुरी चम्काएर सत्लज पुगेजस्तै पुगौँला।
अहिलेलाई आम नेपाली जो रोगले ग्रस्त छन्, त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइन बनाउनुहोस्। बोर्डरमा अलपत्र बसेका हजारौँ, लाखौँ नेपाली नागरिक छन् त्यीनलाई भित्र्याउनुहोस्। सँगै बाँचौला, सँगै मरौँला।
जसका पैसाले हामी नेपाली बाँचेका छौँ, त्यी लाखौँ विदेशीएका मलेसिया र मध्यपूर्वका हाम्रा दाजुभाईलाई ल्याउने आँट देखाउनुहोस्। उनीहरु चाहेर त्यहाँ गएका होइनन्। त्यसलाई तपाई कविताको भाषामा भन्नुहोस्ः अर्काको देशमा गएर कसका निमित्त लड्दैछौ? अर्काका देशमा गएर कसका लागि कमाउँदैछौँ? आउ, आफ्नै देशमा आएर लड, आफ्नै देशमा आएर मर। जोसँग लड्नु छ यही आएर लडौँला।
आफ्नो मुलुकको भारी विसाएर अर्कोका मुलुकको भारी बोक्न किन जाने? भन्नुहोस् कविताका माध्यमबाट। त्यो भन्ने काम तपाईको हो, प्रधानमन्त्रीजी, तपाईको हो।
राष्ट्रपतिलाई पनि म सम्मानपूर्वक सम्झना गराउन चाहन्छुः राष्ट्रपति कुनै पार्टीको सदस्य होइन। के कति कारणले औपचारिकतावस् उहाँले आएर एक पटक बोल्नु पर्छ त्यो मलाई थाहा छैन। तर, बेलायतकी राष्ट्रप्रमुख महारानी एलिजावेथले कोरोनाका बेलामा मुलुकलाई अगाडि बसेर आफूखुशी सन्देश दिएजस्तै सन्देश दिने हैसियत नेपालका राष्ट्रपतिको पनि छ। र त्यसका लागि उहाँले सिंगो नेपालको राष्ट्रपति हुन सिक्नु पर्छ। यो राष्ट्रपतिको सन्देश सबै दल, सबै पक्ष, प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गरिने सन्देश हो। त्यसको यहाँ ध्वनि छैन।
र अत्यमा भन्छु म, कुनै पनि देश र समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या क्यान्सर भन्दा पनि खतरनाक कोभिड–१९ भन्दा पनि खतरनाक समस्या भ्रष्टाचार हो। कुनै समय प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार शून्य देश बनाउँछु भन्दा मान्छे तातेका थिए। तर, यो दुई वर्षमा घटेका अनेकन घटनाको नाम यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्न, सञ्चारमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीहरु दागी भएका कुरा पनि दोहोर्याउन चाहन्न। उहाँहरुले आफूलाई एकदिन सिद्ध गर्नु होला। म मात्र यो भन्छु, गएर गाउँमा, घरमा, जिल्लामा, अदालतमा, प्रशासनमा वास्तविकता बुझ्नुहोस्।
कुनै समय भूमिगत हिँड्नु भएका तपाई मित्रहरु, लडाकू जत्था बनाएर हिँडेका मित्रहरु झुक्किएर भएपनि गाउँको अवस्था बुझ्नुहोस्। त्यो अवस्था बुझ्नु भनेको कोभिडको आतंक बुझ्नु हो।
आज मुलुकलाई सडक पनि चाहिएको छ। तर, त्यो भन्दा पहिले परस्पर सहानुभूति चाहिएको छ। त्यो भन्दा पहिले परस्पर सम्वेदना चाहिएको छ। सबैभन्दा पहिले प्रेम र माया चाहिएको छ। आफ्ना दाजुभाई, हाम्रा छिमेकीलाई माया गर्न नसक्ने व्यक्ति समाजवादी हुँदैन।
माक्र्स र एन्गेल्सका ठेली विर्सनुहोस्। माओको रेडबुक पनि एकछिन गोजिमा थन्क्याउनुहोस्। यत्ति बुझ्नुहोस् समाजवादको मूल परिभाषा भनेको आम जनतालाई माया गर्ने, आफ्ना छिमेकीलाई माया गर्ने, इशाको शब्दमा भन्ने हो भने, आफूलाई माया गरेजस्तै माया गर्ने।
आज यो दस्तावेजमा मैले सबैथोक देखेँ। तर, माया देखिन, प्रेम देखिन। यसैले म यो दस्तावेजको विपक्षमा बोल्दैछु, मतदान दिनु पर्यो भने विपक्षमा मतदान दिन्छु। या त सरकारले समस्या समाधान गरोस्, यदि समस्या समाधान गर्दैन भने ठाउँ छोडोस्। यो म बोलिराखेका छैन, यो द्वितीय महायुद्धको चर्चिल बोल्दैछ। र प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्छ, सान्त्वना दिएर हुँदैन, मसँग तपाईलाई दिनका लागि आँसु बाहेक केही पनि छैन। श्रमबाहेक केही छैन, रोदन बाहेक केही पनि छैन। आउनुहोस्, हामी दुःख पाएर बसौँ। झुठो ललिपप दिने होइन।
Prevपछिल्लोप्रधानमन्त्रीज्यू, संकटको बेला रुजवेल्ट, लिंकनको बाटो हिड्ने कि हिटलर, मुसोलिनीको?[भिडियो सहित]
अघिल्लोलकडाउन जेठ २० गतेसम्म लम्बियो, जनताको सकस अझै बढ्दैNext
कृषिवाली तथा पशुपक्षी बीमा प्रिमियम अनुदान रकममा बृद्धि
बजेट अपडेट: सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कटौती नहुने
बजेट अपडेट: भारतीय नागरिकले अब नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने